သမီးဖြစ်သူကိုရည်းစားစကားပြောဆိုမှုကြောင့်လူငယ်တစ်ဦးကို See More…. – Alanzayar
သမီးဖြစ်သူကိုရည်းစားစကားပြောဆိုမှုကြောင့်လူငယ်တစ်ဦးကို See More….
ယနေ့ ဧပြီလ ၂၇ရက်နေ့ ပူတာအိုမြို့တွင် သမီးဖြစ်သူကို ရည်စားစကားပြောဆိုသော ရဝမ်လူငယ်တစ်ဦးအား ဖခင်ဖြစ်သူက ဓားဖြင့်ထိုးနက်မှုပြုလုပ်ခဲ့သောကြောင့် ဓားထိုးခံရသည့် လူင.ယ် အသ..က်အန္တရာယ်စို.းရိမ်ရသည့်အထိ ထိခို.က်ဒ.ဏ်ရာ ရရှိထားကြောင်းသိရသည်။
ဓာ.းထို.းခံရသော လူငယ်သည် ကောင်ကထောင်ရပ်ကွက် တွင်နေထိုင်သော အသက် ၁၈နှစ်အရွယ်ရှိ ဒလန်ဂင်ရှင်းအောင် ခေါ်သူဖြစ်ပြီး ဓာ.းထို.းဒ.ဏ်ရာပြင်.းထ.န်သည့်အတွက်
လက်ရှိတွင် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် ဆေးကုသခံယူနေရကြောင်း နီးစပ်ရာ ပူတာအိုဒေသခံတစ်ဦးက KNG သတင်းဌာနကိုပြောဆိုခဲ့သည်။“သူ့သမီးဖြစ်သူကို ရည်စားစကားပြောတယ်ဆိုပြီး ဓာ.းထို.းခံရတာ။ ဓာ.းဒဏ်ရာက သူ့ရဲ့ အဆု.တ်နဲ့ ကလီစ.ားအထိ ရောက်တယ်။
သေချာပြန်ကောင်းဖို့ကသိပ်မသေချာဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒ.ဏ်ရာတော်တော်ပြင်းတယ်”ဟုပြောဆိုသည်။ရဝမ်လူငယ်ကို ဓာ.းထို.းနက်ပြုလုပ်သူသည် အောက်ပိုင်းဒေသ သရက်အောင်လံ ဇာတိဖြစ်သူ ဦးကျော်မျိုးဦး ခေါ်သူဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ပူတာအို မြို့မရပ်ကွက်တွင် ပြည်သူ့ဆေးရုံ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာအောက်လုပ်နေသော အလုပ်သမားတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။crd
ယနေ့ ဧပြီလ ၂ရရက်နေ့ ပူတာအိုမြို့တွင် သမီးဖြစ်သူကို ရည်စားစကားပြောဆိုသော ရဝမ်လူငယ်တစ်ဦးအား ဖခင်ဖြစ်သူက ဓားဖြင့်ထိုးနက်မှုပြုလုပ်ခဲ့သောကြောင့် ဓားထိုးခံရသည့် လူင.ယ် အသ..က်အန္တရာယ်စို.းရိမ်ရသည့်အထိ ထိခို.က်ဒ.ဏ်ရာ ရရှိထားကြောင်းသိရသည်။
Previous Article အလုပ်ဖြင့်ခင်မင်ရင်းနှီးသူ နေအိမ်သို့ အလည်ရောက်ရှိလာလို့ ဧည့်ခံမိရာမှအမျိုးသမီးတစ်ဦးSee more
Next Article မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် ကုသိုလ်ပြုခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်များကို မျှဝေလာတဲ့ ဟိန်းဝေယံ